Seriously…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » Seriously….
Posted by Iris on Jul 28, 2014 in My Dear Diary, Photography | 16 comments
ကြာကြာ နဲ့ ခိုင်ခိုင် ဆီသွားတာလား??\_
ဟုတ်​ပ မစ်​စ်​ခင်​​ဇော်​. ပျင်းပြီးအိပ်​​နေကြလို့ ​ကောင်း​ကောင်းမရိုက်​ရဘူး။ ဂျာဂွာတစ်​​ကောင်​လည်းပက်​လက်​လန်​​နေတာ၇ိုက်​တာမမှီလိုက်​ဘူး။ ​ဘေဘီ ဘ​ယောင်း​လေးပဲ​သေ​သေချာချာ​စောင့်​ရိုက်​လာတာ။ ဒါ​တောင်​သူကအိပ်​​နေ​သေးတယ်​။ တကယ်​ချစ်​စရာ​လေး။​မွေးထားချင်​တယ်​။သူ့အ​မွှေး​လေး​တွေကိုဖွဖွ​လေးကိုင်​ချင်​လိုက်​တာ။ River safari ထဲမှာ။
ပက်ကေ့(ချ) လိုက်ဝယ် ရင် ပိုတန်တယ် ဆိုလို့ ပါပါမာမားလာတဲ့ထိစောင့်ပြီး သွားရမား စဉ်းစားနေတာ။
သူတို့ က အကောင်တွေ စိတ်ဝင်စားပါ့မလား မသိ၊
အမှန်​​တော့ ဘာမှထူးထူးခြားခြားရှိဘူး။ အများကြီး​မျော်​လင့်​ထားရင်​​တော့ ​ကျေနပ်​မှာမဟုတ်​ဘူး။ ဘာ​တွေ့​တွေ့​ပျော်​ရင်​​တော့ ​ကျေနပ်​မှာပါ။ ငါး​အကြီးကြီး​တွေရှိတယ်​။ထူဆန်းတဲ့မိ​ကျောင်းလည်းရှိတယ်​။ ​အ​မေဇုံ​လှေစီးရင်​ ဟုတ်​ဟုတ်​မဟုတ်​ဟုတ်​​အော်​ပလိုက်​။ ဟီး။ ဒါ့ပုံရိုက်​မလို့လန်းစ်​လဲ​နေတုန်း ဂိတ်​ပြန်​​ရောက်​သွားတယ်​။ သူငယ်​ချင်း​တွေနဲ့သွားတဲ့အတွက်​ ဘာ​တွေ့​တွေ့သ​ဘောကျတယ်​။ လူုကြီး​တွေက​တော့ငါးပြခန်း​တွေကြိုက်​မယ်​ထင်​တယ်​။ ဟုတ်​ဟုတ်​မဟုတ်​ဧုတ်​​ခေါ်သာသွား အ​ရှေ့​တောင်​အာရှမှာ ပထမဦးဆုံး ၀ါးတားဆာဖာရီ ကို​ရောက်​ဖူးသွားတာ​ပေါ့လို့​ပြောပလိုက်​။ ဟီး…စလုံးက​တော့ အမြဲ​ပြောတာ world biggest တို့ world largest, တို့ ​အေး​အေးချမ်းချမ်း အနားယူဖို့​တော့​ကောင်းတယ်​ ​ရေစပ်​နားမှာဆို​​တော့။
ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ Red Panda လေး။
အရီး မှာလဲ ပုံတွေ ရိုက်ထားတာ ရှိတယ်။
Zoo မှာ တစ်နေ့လုံး စောင့်နေရတာ နေ့လည်စောင်း မှ နိုးတော် မူလာကြတယ်။
ကလေး က ကြိုက်လွန်းလို့ အဲဒီ အကောင် ကို ကြည့်ဖို့ ကို သွားရတာ။
မြန်မာပြည် ရောက်တုန်းကလဲ သွားကြည့်တယ်။
သူ့ခမျာ နေရတာ လှောင်ချိုင့် ထဲမှာ။
အခုတော့ အဲဒီအကောင်လေး သေသွားပြီ ကြားတယ်။
ပန်ဒါ ကိုတော့ အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးဘူး။
ပေါက်စ လေးတွေ ကိုတော့ တီဗီ Documentary ထဲ တွေ့ဘူးတာ တအား ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
သနားစရာလေးတွေပါ…သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့ လွတ်လပ်ချင်ရှာပေလိမ့်မယ် :p:
ဟုတ်​တယ်​ ဦးမိုက်​ အဲ့ပုံ​လေး​တွေတစိမ့်​စိမ့်​ပြန်​ကြည့်​ရင်းဝမ်းနည်းတယ်​။
ဟုတ်​တယ်​အရီး..သူငယ်​ချင်း​တွေသွားမယ်​​ပြောတုန်းကအင်​တင်​တင်​လုပ်​​နေတာ။ မနက်​ကျ​တော့မိုး​တွေရွာ taxi က လွယ်​လွယ်​မရ on call ​တောင်​​တော်​​တော်​​စောင့်​ရတာ။ ဘုတ် ​လက်​မှတ်​​တွေ က အချိန်​အတိအကျလုပ်​ထား​တော့​နောက်​ကျ ​တော်​​တော်​ စိတ်​တို​နေတာ။ သူတို့ကိုမြင်​​တော့မှ ​​ပျော်​သွား​တော့တယ်​။ အိပ်​​နေတာကိုလှည့်​ပတ်​​ချောင်းပြီးရိုက်​လာတာ။ ဟီး ဒါ့ပုံမရိုက်​ရဘူးလို့သတိ​ပေး​နေတယ်​လို့သူငယ်​ချင်းက အိမ်​ပြန်​​ရောက်​မှ​ပြောပြလို့သိရတယ်​။ အင်​.ငါကဖလက်​မဖွင့်​ဘူး​လေလို့။ သူတို့​ရေးထားတာ ဖလက်​မဖွင့်​ရဘူးလို့​ ​ရေးထားတာ​လေလို့။ တကယ်​​တော့ ကိုယ့်​အာရုံနဲ့ကိုယ်​ဆို​တော့ သူတို့​ပြောတာမကြားမိဘူး။
သူတို့ကRed panda လို့​ပြော​ပေမဲ့ ကိုယ့်​စိတ်​ထဲ​တော့ အညို​ရောင်​ထင်​​နေတာပဲ။ သနားစရာ​လေး​တွေ။ သူတို့မျက်​လုံးကိုကြည့်​လိုက်​တာနဲ့ နှစ်​သိမ့်​​ပေးချင်​စိတ်​​ပေါက်​သွားတယ်​။ ကိုယ်​နဲ့ခံစားချက်​တူ​နေသလိုလို။
အဲလာပဲ… အဲလာပဲ… စလုံးကျွန်းသူတွေများ
တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ဇိမ်ကျနေတာ ဓာတ်သေရိုက်ပြီး နှောက်ယှက်တယ်…
ရုံးမှာ ထမင်းလုံးစီပြီး အိပ်ငိုက်နေတုန်း အီးမေးလ် အစောင်တစ်ရာလောက် ဝင်ပါစေ…
အဟွတ်… စလုံးမှာ Night Safari ဘယ်တော့မှမသွား…
တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ ညဘက် OT ဆင်းနေရတာ ကိုယ်ချင်းစာလို့…
ဦးဦးမစ်​စတာ​မောင်​​ကြောက်​စ်​.. မီးမှာ မဖတ်​ရ​သေးတဲ့​မေး ​တွေ အများကြီးပဲ။ ​နေ့ခင်းလည်းထမင်းလုံးမစီနိုင်​ဘူး။ မစီဆိုထမင်းမှ မစားတာ။ ဟိ. မက်​ရှင်းက​ရောင်းတဲ့​ပေါင်​မုန့်​အသားညှပ်​နဲ့ပဲစခန်းသွား​နေတာ။ ​နှောက်​ယှက်​တာမဟုတ်​ဘူး ဘ၀တူဆိုပြီးအား​ပေးတာပါ။
အိုတီမဆင်းချင်​လို့ထမင်းစားချိန်​လည်းအလုပ်​လုပ်​ရပါတယ်​ရှင့်​။ weekend မှာနားချင်​လို့။ အိုတီရမဲ့ပိုက်​ပိုက်​ထပ်​ အလုပ်​ပီးဖို့ရင်​ ကိုယ့်​စိတ်​နားဖို့ရယ်​weekday မှာကြုံးလုပ်​ရပါတယ်​ရှင့်​။
အင်း အလင်းဆက်​ ​လောက်​​တော့​ချောဘူး​ပေါ့။
ချစ်ချာလေးတွေ… ချင်ကပူမရောက်တာကြာပြီ… ရောက်ခဲ့တဲ့အခေါက်တွေက ယူနီဗာဆယ်တို့ဘာတို့မရှိသေး… သများလာတော့မှ အဲ့ချင်ကာပူသူတွေကို ဓာ့ပုံခိုးရိုက်မယ်…
ဒီဇင်​ဘာလာခဲ့ခရစ်​။ လာရင်​မုန့်​ဝယ်​​ကြွေးခိုင်းရမယ်​။ ​မော်​ဒယ်​လုပ်​​ပေမယ်​။ ကိုယ့်​ရိုက်​​ပေးမဲ့သူရှိတုန်း။ ဟီးဟီး။
ဝါးကွတ်ပစ်ပေါ် မှာ အိပ်နေတာလေး သဘောကျပ